China Chain Link ngere N'ihi azụmahịa na obibi ngwa Manufacturer na Supplier | Oghere
A na-akpọkwa eriri njikọ eriri dị ka ntaneti waya, ntan-waya ntan, eriri waya, eriri ngere, ikuku hurricane, ma ọ bụ ngere diamond. Ọ bụ ụdị nke ogige a kpara akpa nke a na-ejikarị waya waya galvanized na ogige ịgba ogige mara mma na Canada na USA.
A na-akpọ mmepụta nke eriri njikọ eriri akwa. Waya na-agba ọsọ kwụ ọtọ ma na-ehulata n'ime ụkpụrụ zigzag nke mere na "zig" nke ọ bụla na waya ahụ jikọọ ozugbo n'otu akụkụ yana "zag" nke ọ bụla na waya ahụ ozugbo na nke ọzọ. Nke a na-etolite njirimara diamond mara mma na eriri njikọ. PRO.FENCE na-echepụta ihe nkedo na njikọta ọkụ bụ usoro nke ịgbakwunye mkpuchi zinc na nchara iji belata nchara na nchara. Anyị na-enyekwa vinyl-coated chain-link nsu nke a na-esi na waya galvanized site na vinyl. A na-etinyekarị ụdị dị iche iche nke eriri njikọ na ntọala ụkwụ. Mana PRO.FENCE nwere ike iweta ikpo ala kama iwelata akara ụkwụ carbon ma chekwaa oge echichi. Na mgbakwunye, PRO.FENCE nwere ndị R&D nwere ike ịmepụta ngwaahịa iji kwado ahịa ka ọ wee nwee ike ịnye ụdị nsu ​​dị iche iche.
Chain njikọ nsu bụ ihe kachasị ewu ewu, sistemụ na-anabata usoro fencing maka obibi, azụmahịa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Could nwere ike ịchọta ya gburugburu ụlọ ụlọ, ụlọ tennis, ogige basketball, ụlọ akwụkwọ, nnukwu ụlọ ahịa, ogige ntụrụndụ wdg.
PRO.FENCE na-enye ngere njikọ eriri na Galvanized ma ọ bụ Full ntụ ntụ ntekwasa na n'ọtụtụ dị elu na nkọwa.
Ntupu: 60 × 60mm
Ogwe ogwe: H1200 / 1500/1800 / 2000mm，30m / 50m na ​​mpịakọta
Biputere: φ48 × 1.5
Ntọala: Ntọala / ihe nkedo
Ejiri akwa: SUS304
Emechara: kpaliri / Powder ntekwasa (Brown, Black, Green, White, Agba aja aja)
Chain njikọ nsu bụ ihe kasị akụ na ụba nsu tụnyere ndị ọzọ nsu n'ihi na kasị ala na-eri nke echichi. Nchịkọta mpịpụta ya na-enyere nrụnye na nrụzi dị mfe ma ọ bụrụ na akụkụ fencing na-emebi. Chain njikọ nsu ga-abụ ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na mmefu ego bụ a nnukwu nchegbu nke gị.
2) Dị iche iche
Chain njikọ ngere nwere ike ịdị na elu elu, gauges dị iche iche na agba niile. Ọbụna enwere ike gbanwee usoro ahụ maka ngwa dị iche.
3) Anwụ ngwa ngwa
Wekpụrụ ịkpa ákwà nke nwere waya mgbatị dị elu nwere ike imegide nsogbu ndị dị na mpụga nke ọma, na nhazi zig na-enye ụzọ nke ikuku ma ọ bụ snow iji gbochie ngere site na mmebi ihu igwe.
Ngwunye ígwè a siri ike nwere ike ịmepụta ihe nchebe maka ihe onwunwe gị. Nke a yinye njikọ nsu nwere ike kpọkọta n'ime 20ft elu ma ọ bụrụ na achọrọ na tinye barbed waya na elu iji gbochie ịrị.
Nkebi NO.: PRO-08 Ebute :bọchị: -21BỌCH 15 15-21 Nbanye ngwaahịa: CHINA
Kwụ :gwọ: EXW / FOB / CIF / DDP Port Mbupu: TIANJIANG, CHINA MOQ: 20rolls
Nke gara aga: Oké ọrụ mpịakọta onu Trolley n'ihi na ihe onwunwe njem na nchekwa （3 kwadoro）
Osote: BRC welded ntupu ngere maka Architectural ngere
Welded Waya ngere
Ogige ugbo maka ehi, atụrụ, mgbada, ịnyịnya